Igumbi lokuhlala elinamagumbi amabini okulala ukuya erenti e-Chelmsford, e-Essex
Real Estate Listings: » Residential homes » Houses » GB » Essex » Chelmsford » Igumbi lokuhlala elinamagumbi amabini okulala ukuya erenti e-Chelmsford, e-Essex1
United Kingdom, Essex, Chelmsford, Cm2 0nf
Ikhowudi yeposi: Cm2 0nf
Iimbonakalo: City centre location, Allocated parking space, Large terrace, Newly renovated throughout, 2 double bedrooms, Furniture by separate negotiation, Available now
IsishwankatheloHigh spec. Kwaye indlu yangoku ephezulu yendawo ephezulu yendawo yokuhlala ineemboniselo ezifikelela kude, indawo enkulu yokupaka izithuthi, indawo ebekwe entliziyweni yeChelmsford isixeko centre.Iphepha-mveliso elitsha lophawu lwendlu yeepenteli yegumbi- limi entliziyweni ye-Chelmsford dolophu, kufutshane kwesona sikhululo sikhulukazi saseChelmsford.Le ndawo intle kangaka ibandakanya; Amagumbi amabini okulala amabini (inkosi en en-Suite), igumbi lokuhlambela usapho, igumbi lokuwamkela ngokubanzi elinendawo ekude neemboniselo ezinkulu zekhitshi elitsha nelinezinto zombane ezidityanisiweyo.Ezinye izibonelelo zethu zibandakanya indawo yendawo yokupaka. Unikezwe awuchazwanga kwaye uyafumaneka ngoku.Xa yonke imigudu efanelekileyo isenziwa ukuqinisekisa ukuchaneka kweenkcazo kunye nomxholo, kufuneka sikwazise kolu khokelo okanye ukusikelwa umda. (1) imigaqo yokuhambisa imali-abaqeshi oza kubakho baya kucelwa ukuba bavelise amaxwebhu achongiweyo ngexesha lenkqubo yokumakisha kwaye siya kucela intsebenziswano yenu ukuze kungabikho kulibaziseka ekuvumeni ilungelo lokuhlala. (2) Ezi nkcukacha aziyonxalenye yazo zonke izithembiso okanye isivumelwano. (3) Isicatshulwa, iifoto kunye nezicwangciso zezikhokelo kuphela kwaye aziyomfuneko ngokupheleleyo. (4) Imilinganiselo: Obu bukhulu begumbi eliqikelelweyo bucwangciswa kuphela njengesikhokelo ngokubanzi. Kuya kufuneka uqinisekise ngobungakanani bayo ukuze wanelise ukuchaneka kwazo. (5) Kuya kufuneka wenze eyakho imibuzo malunga nepropati, ngakumbi malunga nempahla ekufuneka ibandakanyiwe / ingabandakanywa kwaye zeziphi izibonelelo zokupaka. (6) Phambi kokuba ungene kulo naliphi na ilungelo lokuqesha kwisakhiwo esinye sezinto ezipapashiweyo, imeko nemixholo yepropati iya kuchazwa kwisivumelwano sokuhlala kunye ne-inventri. Nceda uqiniseke ukuba ufunda ngononophelo kwaye uyavumelana nesivumelwano sokuhlala kunye nayiphi na i-inventri enikezwe ngaphambi kokutyikitya la maxwebhu.
Nxibelelana nentengiso 0124540xxxx
, Cm2 0nf
I-Chelmsford () sisixeko sesiNgesi kunye neyona ndawo iphambili yeSixeko saseChelmsford, kunye nedolophu yase-Essex, eMpuma ye-England. Ikwibhanti yaseLondon yabakhweli, malunga neekhilomitha ezingama-48 kumantla-mpuma eziko laseLondon kwiCharing Cross kunye neekhilomitha ezingama-35 ukusuka eColchester. Indawo yedolophu esixekweni inabemi abamalunga ne-11, 000, ngeli xesha isithili sinabemi abayi-168,310. Indawo ephambili yaseChelmsford ibandakanya konke okanye inxalenye yendawo ebelikuyo ngaphambili kweBroomfield, Great Baddow, Galleywood, Writtle, Moulsham, Widford, kunye I-Springfield, kubandakanya i-Springfield Barnes, ngoku ebizwa ngokuba yi-Chelmer Village. Uluntu lwaseChelmsford, Massachusetts, eChelmsford, Ontario naseChelmsford, New Brunswick, kuthiwaywa kwesi sixeko. Inani labemi baseChelmsford linenani elikhulu labakhweli besiXeko nabaseDocklands, abathe batsalelwa luhambo lwemizuzu engama-30 ukuya kwengama-35 ukuya kuCentral London ngololiwe oMkhulu weMpuma. Uhambo olufanayo luthatha malunga nemizuzu engama-60 ngendlela nge-A12. Ngomhla we-14 ku-Matshi ngo-2012, u-Mongameli we-Bhunga lase-Privy kunye no-Sekela Nkulumbuso u-Nick Clegg wabhengeza ukuba i-Chelmsford yayiza kunikwa ubume be dolophu ukuphawula i-Jubilee ka-Elizabeth II. Iileta zeLatent ezinikezela ngokusesikweni isigxina sedolophu e-Chelmsford zafunyanwa nge-6 kaJuni ngo-2012. Isikhundla somhlali waseChelmsford yi "I-Chelmsfordian".
950 Pound £ / Ngenyanga
&nbspChelmsford in Essex, Cm2 6ty
2 Bed End Terrace House To Rent In Chelmsford, Essex
1,075 Pound £ / Ngenyanga
&nbspChelmsford in Essex, Cm2 0ha
1,050 Pound £ / Ngenyanga
&nbspChelmsford in Essex, Cm2 0au
2,500 Pound £ / Ngenyanga
&nbspChelmsford in Essex, Cm2 6az
3 Bed Detached House To Rent In Chelmsford, Essex
1,400 Pound £ / Ngenyanga
&nbspChelmsford in Essex, Cm1 6fl
Izikolo ezikufutshane Cm2 0nf